အထူး ကြပ်မတ် ကုသဆောင် များကို လေအေးပေး စက်တပ် မထားပါက ဆရာဝန် များ ကိုဗစ် ကူးစက် မခံရစေ ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိ…. – Cele Posts
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ လူနာ များကို ကုသပေးနေသည့် ဆေးရုံများမှ အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်များကို လေအေးပေးစက်များ တပ်ဆင်မထားခြင်း အားဖြင့် ဆရာဝန်များကို ရောဂါကူးစက်မှု ကန့်သတ်နိုင်ကြောင်း ထိပ်တန်းအိန္ဒိယ သုတေသနအင်စတီကျူ့တခု၏ လေ့လာမှုအရသိရသည်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှ ရှေ့တန်း ကျန်းမာရေး လုပ်သားများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်ကိုခံနေရပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ တွင် ကိုဗစ်ကြောင့် ဆရာဝန် အယောက် ၅၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
“အလယ်မှာ ထားရတဲ့ လေအေးပေးစက် စနစ်တွေရဲ့လေကြောင်း လည်ပတ်မှုကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ရောဂါကူးစက်မှုတွေ သိသိသာသာဖြစ်လာစေပြီး ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေ သေဆုံးနေရပါတယ်။” ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ ထဲပါဝင်သည့် ဘန်ဂလူရူမှ အိန္ဒိယသိပ္ပံ အင်စတီကျူ့၏ လေ့လာမှု အရသိရသည်။
လေကြောင်းပြန်လည် လည်ပတ်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် ပြင်ပလေအသုံးပြုမှုမြှင့် တင်ခြင်းသည် အလုံပိတ်ခန်း များတွင် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရမှု လျှော့ချနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကပြောသည်။
ယခင်လေ့လာချက်များ အရ အပူပိုင်း ဒေသနိုင်ငံများတွင် လေအေးပေးစက် များဖွင့်ထားခြင်းကြောင့် အလုံပိတ်ခန်းများတွင်ခြောက်သွေ့မသွား စေရန် သတိထားသင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်များ ရှိနေပြီး အခန်းတွင်စိုထိုင်းဆ ၄၀ နှင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားထားပါက ဗိုင်းရပ်စ်လေမှတဆင့်ပျံ့နှံ့မှုလျော့ကျနိုင်ကြောင်းလည်း အသိပေးသည်။
လေအေးပေးစက်မရှိပါက အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်များကို လေမှုတ်သည့် ပန်ကာများ တပ်ဆင်ပေးထားသင့်ပြီး အပြင်တွင် လေပြန် မထုတ်ခင် ဆပ်ပြာအခြေခံသည့် လေစစ်ထုတ်မှု သို့မဟုတ် အလွန်ပူသော ရေနွေးတို့ဖြင့် သန့်စင်သင့်ကြောင်းလည်း အိန္ဒိယလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြသည်။
လေအေးပေးစက် လိုအပ်သည့် အထူးကြပ်မတ် ဆောင်များတွင် ကိုဗစ် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များကို အခြားကြပ်မတ်ဆောင် များ၏ လေအေးပေးစက် စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မထားရဘဲ စစ်ထုတ်ခြင်းအတွက် ကူးစက်ခံရထားရသည့်လေများကိုဆွဲထုတ်ရန် လေမှုတ်ထုတ်သည့်ပန်ကာများတပ်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းလည်း လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြသည်။
အထူး ကွပျမတျ ကုသဆောငျ မြားကို လအေေးပေး စကျတပျ မထားပါက ဆရာဝနျ မြား ကိုဗဈ ကူးစကျ မခံရစေ ကွောငျး လလေ့ာ တှရှေိ့….
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ လူနာ မြားကို ကုသပေးနသေညျ့ ဆေးရုံမြားမှ အထူးကွပျမတျ ကုသဆောငျမြားကို လအေေးပေးစကျမြား တပျဆငျမထားခွငျး အားဖွငျ့ ဆရာဝနျမြားကို ရောဂါကူးစကျမှု ကနျ့သတျနိုငျကွောငျး ထိပျတနျးအိန်ဒိယ သုတသေနအငျစတီကြူ့တခု၏ လလေ့ာမှုအရသိရသညျ။
ကမ်ဘာတဝနျးမှ ရှတေ့နျး ကနျြးမာရေး လုပျသားမြားသညျ ကိုဗဈ-၁၉ ဒဏျကိုခံနရေပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံ တှငျ ကိုဗဈကွောငျ့ ဆရာဝနျ အယောကျ ၅၀၀ ကြျောသဆေုံးခဲ့သညျ။
“အလယျမှာ ထားရတဲ့ လအေေးပေးစကျ စနဈတှရေဲ့လကွေောငျး လညျပတျမှုကွောငျ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှကေို ရောဂါကူးစကျမှုတှေ သိသိသာသာဖွဈလာစပွေီး ဆရာဝနျတှေ၊ သူနာပွုတှေ သဆေုံးနရေပါတယျ။” ဟု အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ အကောငျးဆုံး သိပ်ပံတက်ကသိုလျမြား ထဲပါဝငျသညျ့ ဘနျဂလူရူမှ အိန်ဒိယသိပ်ပံ အငျစတီကြူ့၏ လလေ့ာမှု အရသိရသညျ။
လကွေောငျးပွနျလညျ လညျပတျမှု လြှော့ခခြွငျးနှငျ့ ပွငျပလအေသုံးပွုမှုမွှငျ့ တငျခွငျးသညျ အလုံပိတျခနျး မြားတှငျ ကိုဗဈ ကူးစကျခံရမှု လြှော့ခနြိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေး အဖှဲ့ကပွောသညျ။
ယခငျလလေ့ာခကျြမြား အရ အပူပိုငျး ဒသေနိုငျငံမြားတှငျ လအေေးပေးစကျ မြားဖှငျ့ထားခွငျးကွောငျ့ အလုံပိတျခနျးမြားတှငျခွောကျသှမေ့သှား စရေနျ သတိထားသငျ့ကွောငျး အကွံပွုခကျြမြား ရှိနပွေီး အခနျးတှငျစိုထိုငျးဆ ၄၀ နှငျ့ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကွားထားပါက ဗိုငျးရပျဈလမှေတဆငျ့ပြံ့နှံ့မှုလြော့ကနြိုငျကွောငျးလညျး အသိပေးသညျ။
လအေေးပေးစကျမရှိပါက အထူးကွပျမတျ ကုသဆောငျမြားကို လမှေုတျသညျ့ ပနျကာမြား တပျဆငျပေးထားသငျ့ပွီး အပွငျတှငျ လပွေနျ မထုတျခငျ ဆပျပွာအခွခေံသညျ့ လစေဈထုတျမှု သို့မဟုတျ အလှနျပူသော ရနှေေးတို့ဖွငျ့ သနျ့စငျသငျ့ကွောငျးလညျး အိန်ဒိယလလေ့ာမှုတှငျဖျောပွသညျ။
လအေေးပေးစကျ လိုအပျသညျ့ အထူးကွပျမတျ ဆောငျမြားတှငျ ကိုဗဈ အထူးကွပျမတျကုသဆောငျမြားကို အခွားကွပျမတျဆောငျ မြား၏ လအေေးပေးစကျ စနဈမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျမထားရဘဲ စဈထုတျခွငျးအတှကျ ကူးစကျခံရထားရသညျ့လမြေားကိုဆှဲထုတျရနျ လမှေုတျထုတျသညျ့ပနျကာမြားတပျဆငျထားသငျ့ကွောငျးလညျး လလေ့ာမှုတှငျဖျောပွသညျ။